Muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika – HalQaran.com
Amnesty calls on Somali authorities to free journalist Abuja
AKHRISO: Wasaaradda Waxbarashada ee DF Somaliya oo shaacisay xilliga la qaadayo imtixaanaadka Shahaadiga
Madaxweynaha Somaliland ‘Biixi’ oo Hargeysa ku qaabilay wafdi ka socda Dowladda Kenya
DHAGEYSO: ‘‘Golaha Shacabka way ka go’an tahay inuu hirgelo matalaadda Gobolka Banaadir‘‘, Guddoomiye Mursal
Muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika
June 28, 2020 June 28, 2020 HalQaran Staff	0 Comments Ganacsade Soomaaliyeed oo lagu dilay Koonfur Afrika
Koonfur Afrika (Halqaran.com) – Ganacsade Soomaaliyeed, ayaa xalay lagu dilay Magaalada East london ee Gobolka Eastern Cape ee Koonfur Afrika, kadib markii ay toogteen koox hubaysan oo Burcad Koonfur Afrikaan ah.
Marxuumka la dilay waxaa lagu Magacaabi jiray Daahir Carte, isagoo ahaa Ganacsi caan ka ahaa East london ee Gobolka Eastern Cape.
Booliska Koonfur Afrika oo tagay goobta dilka uu ka dhacay ayaan ku guuleysan inay soo qabtaan gacan ku dhiiglayaashii ka dambeeyay dilkaasi loo gaystay muwaadinka Soomaaliyeed.
Koonfur Afrika waxaa ku soo badanaya dilalka arxandarada ah ee loo gaysanaayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee halkaasi shaqooyinka ganacsiga u jooga.
Ugu dambeyn, burcadda madowga ayaa dhac iyo boob u gaysta goobaha ganacsiga ee Soomaalida ay leeyihiin, waxaana jirta inay sii kordhayaan dhibaatada shacabka loo gaysanayo.
← Wax badan ka ogow labada nooc ee doorasho oo ay shaacisay Xaliimo Yarey & Xilliga la qabanayo
Banaanbax lagu taageerayo Ansixintii Malataada gobolka Banaadir oo ka socda Muqdisho +(SAWIRRO) →
Akhri Daraasad: Ma ogtahay in dawooyinka dhiig-karka la ogaaday inay wanaagsan yihiin in la qaato habeenkii?!
October 28, 2019 October 27, 2019 Editor 0
Canug Soomaali ah oo noqday kii ugu horreeyay ee Toronto ku dhashay 2020 +SAWIR
January 3, 2020 January 3, 2020 Halqaran 0
Madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland oo kulan fool-ka-fool ah ku yeeshay Gaalkacyo +(SAWIRRO)
June 26, 2020 June 26, 2020 HalQaran Staff 0
July 3, 2020 July 3, 2020 Halqaran 0
A senior member of al-Shabab militants on Friday surrendered to the Somali National Army (SNA), a military official confirmed. “Mohamed
Somali forces clash in Dhusamareb, 5 injured
July 1, 2020 July 1, 2020 Halqaran 0
Somalia marks 60th independent anniversary with grand development projects
AU Special Representative sends a message of goodwill to Somalia on its 60th Independence anniversary celebration
June 30, 2020 June 30, 2020 Halqaran 0
World Bank okays $40m grant for Somalia’s locust response
Trump in ‘fragile’ mood and may drop out of 2020 race if poll numbers don’t improve, GOP insiders tell…